window 7Installation 2.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ …..ဒီစာအုပ်ကလေး က Window တင်ဖူးနေသူတွေအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို အရေးမပါတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၉ဒါပေမယ့်လည်းဟိုအရင်က WindowXPကိုပဲတင်ဖူးနေပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ Window7နဲ့ ကျတော့ နဲနဲ ကွဲပြားလာတာကလေးတွေ ရှိလာပါတယ် ၉ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စမ်းပြီးတော့ တင်ရင်လည်း ရပါတယ်၉  ဒါပေမယ့် ကွဲနေတာကလေးတွေရှိနေတော့ တခါတည်းတင် တခါတည်းပွဲသိမ်းဖြစ်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေသွားအောင်ပါခင်ဗျာ ၉လုပ်ရတာလွယ်ကူအောင် ပုံကလေးတွေနဲ့ လည်းရှင်းပြထားလိုက်ပါတယ် ၉ အဆင့်လိုက်ကလေးတွေကိုပုံကလေးတွေ နဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ၉ Window စတင်မယ့်သူတွေအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် ……Window7မတင်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာလိုအပ်မယ့် Requirement ကလေးကတော့အောက်မှာပါ၉တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ အဲဒီ့လောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ မတင်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာ၉ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းသုံးနေကျတဲ့ စက်တွေမှာတော့ တော်တော်များများက ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၉Window7System Requirement 1. 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor 2. 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or2GB RAM (64-bit) 3. 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit) 4. DirectX9graphics device with WDDM 1.0 or higher driver(to enable the Aero theme)အဲဒီ့အချက်တွေနဲ့ ကိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ ကဲ စပြီးတော့ လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ …..ဒီပထမ အဆင့်တွေကတော့ window တင်တိုင်းပြောင်းပေးနေရမယ့် အဆင့်မလို့အတူတူပါပဲ ၉Window တက်တက်ချင်းမှာ ဘယ်ကနေပြီးတော့ စပြီးတော့ ဖတ်မလဲဆိုတာကိုရွေးပေးရပါ့မယ် ၉Boot setting ကိုပြောင်းပေးရပါ့မယ်၉ Window စတက်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်က CDခွေကနေစတက်ပြီးတော့ Window ကို Install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောင်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၉ ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ ၉ ????စက်ကို ပထမ Restart ချလိုက်ပါ ၉ ပြီးရင်တော့ Delete key ကိုနှိပ်ပေးထားလိုက်ပါ၉ အဲဒါဆိုရင်တော့CMos setting ထဲကှိုင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၉Intel Motherboardအခုအောက်ကပုံကလေးကတော့ Intel motherboard ရဲ့ CMos setting ဖြစ်ပါတယ် ၉ အဲဒီ့မှာ Intelmotherboard ဆိုရင်တော့ အပေါ်က tab ဘားကလေးတွေကို Arrow ကလေးတွေနဲ့ကျော်ပြီးတော့ 3.
Boot ဆိုတာကိုရွှေ့ပြီးတော့သွားလိုက်ပါ …သွားပြီးရင် အဲဒီ့အောက်ကလေးမှာ Boot Device Priorityဆိုတာကိုတွေ့ပါ့မယ်၉အဲဒါကို Enter ခေါက်လိုက်ပါ ၉အဲဒါဆိုရင်တော့ အောက်မှာ1st Boot Device2nd Boot Device3rdBootDevice ဆိုတာကလေးကိုတွေ့ရပါ့မယ်၉ 4.
အဲဒီ့နေရာကလေးမှာ 1st Boot device ဆိုတာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ CD/DVD Drive ကိုရွှေးပေးရပါ့မယ်၉ပြီးရင်တော့ 2nd Boot device ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Hard disk ကိုရွေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ၉ရွေးတာကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကလေးတွေဆီကို Arrow ကလေးတွေနဲ့သွားလိုက်ပါ ၉ ပြီးရင်အဲဒီ့နေရာကလေးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Enter ကိုခေါက်ချလိုက် ပြီးရင် ရွေးစရာရှိတာကလေးကိုရွေးလိုက်ရင်ရပါတယ် ၉ 5.
အပေါ်ကပုံကလေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ 1st boot device မှာ CD drive ကိုရွေးပြီး 2nd boot device မှာhard drive ကိုရွေးထားတဲ့ပုံကလေးဖြစ်ပါတယ်၉ အဲဒီ့လိကလေးရွေးပြီးပြီဆိုရင်တောု့F10ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၉ အဲဒီ့မှာသူကမေးပါလိမ့်မယ် ..Save configuration changes and exit now?စောစောက လုပ်လာတာတွေကို save လုပ်ပြီးတော့ CMos setting ထဲကထွက်မှာလားလို့မေးပါလိမ့်မယ် ၉ အဲဒါဆိုရင်တော့ Ok ပေါ့ ၉ ကိုယ်လုပ်ထားတာပဲ Save ပြီးထွက်ရမှာပေါ့ :P :P OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ စက်က Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ် ၉အခု ပြခဲ့တာကလေးတွေကတော့ Intel Motherboard ရဲ့ CMos setting ကိုပြောင်းတဲ့ပုံကလေးတွေပါ၉ 6.
ASUS Motherboardအခုအောက်ကပုံကလေးတွေကတော့ Asus motherboard ရဲ့ Cmos setting လေးတွေဖြစ်ပါတယ်၉အဲဒီကိုသွားတာကလည်း window စတက်ဖို့လုပ်ချိန်မှာ Delete Key ကိုဆက်တိုက်နှိပ်ထားလိုက်ပါ ၉အဲဒါဆိုရင် Cmos setting ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၉ ဒီပုံကလေးတွေကိုတော့ အရင်ကwindow installation စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကပဲ ယူပြီးတော့ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ၉အခုအောက်ပုံကတော့ Asus ရဲ့ Cmos setting ဖြစ်ပါတယ်၉အဲဒီ့မှာ Advanced BIOS Features ဆိုတာကလေးကိုရွေးပြီးတော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ၉အဲဒါဆိုရင်အောက်ကပုံကလေးကိုမြင်ရပါ့မယ်၉အဲဒီ့ကိုရောက်ရင်တော့ အောက်က First Boot Device ကိုသွားလိုက်ပါ၉ ပြီးရင်တော့ Enterခေါက်လိုက်ပါခင်ဗျာ၉ဒါကတော့ First Boot device ကိုသွားတဲ့ပုံကလေးပါခင်ဗျာ 7.
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံကလေးကလို First Boot Device ကို CDRom ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ၉ဒီအောက်ကပုံကလေးကတော့ Second Boot Device ကို Hard Disk ကိုရွေးပေးတဲ့ပုံကလေးပါ၉အဲဒီ့လိုရွေးပြီးသွားရင်တော့ F10 ကိုနပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ၉ အဲဒါဆိုရင် အောက်ကပုံကလေးလို Saveှိပြီးတော့ ထွက်မှာလားလို့မေးပါ့မယ်၉ 8.
အဲဒါဆိုရင် တော့ Y ကိုနှိပြ် ပီးတော့ Enter ခေါက်ချလိုက်ပါ၉ အဲဒါဆိုရင်တော့ Windowစတင်လို့ရပါပြီ၉Installation Stageအပေါ်ကအဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Window စတင်ပါ့မယ်၉ စတော့မယ်ဆိုရင်အောက်ကပုံကလေး ပေါ်လာပါ့မယ်၉ ပုံ ( ဿ )CD ဒါမှမဟုတ် DVD ကနေပြီးစပြီးတော့ Boot တက်မယ်ဆိုရင် Key တစ်ခုခု ကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်၉ အဲဒီ့ အခါကျရင် Keyboard က Key တစ်ခုခု ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.၉နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အောက်က ပုံကလေးကိုမြင်ရပါ့မယ် ၉ Window ခွေကိုစဖတ်တဲ့ပုံကလေးပါ၉(မှတ်ချက်၉ ၉ အဲဒီ့နေရာမှာ Keyboard က Keyကို နှိပ်ပါဆိုတာမှာ ပထမဆုံးအခါမှာပဲနှိပ်ရပါ့မယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်တက်လာခဲ့ရင် နှိပ်စရာမလိုပါဘူး ၉) 9.
ပုံ ( ၀ ) ပုံ ( ၁ )အခုပုံကလေးတွေပြီးသွားရင်တော့ အောက်ပုံကလေးကိုမြင်ရပါ့မယ် ၉ အဲဒီ့မှာ ရွေးစရာရှိတာကလေးတွေကိုရွေးပေးပြီးတော့ Next ကိုပေးလိုက်ပါ .၉ 10.
ပုံ ( ၂ ) ပုံ ( ၃ )အဲဒီ့မှာ Intall now ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ့မယ် .၉နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါဦး .၉စောင့်ပြီးတော့ ခဏအကြာမှာအောက်ကပုံကလေးကိုမြင်ရပါ့မယ်၉ ကိုယ်က ဘယ်အမျိုးအစားကိုInstall လုပ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ မေးတာပါ၉ 11.
ပုံ ( ၄ )(မှတ်ချက် ၉ ၉ ပုံ ( ၄ ) နေရာကလေးမှာ ကျွန်တော်က window7all edition ပါတဲ့ ခွေကိုသုံးထားတဲ့အတွက်အခုလို ကလေးပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၉ တကယ်လို့ Window7Ultimateတစ်ခုတည်းပါတာ ကိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင် တော့ အခုလိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ၉ အဲဒီ့အဆင့်ကိုကျော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၉ ပုံ (၅ ) ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၉ ) ပုံ ( ၅ )ဒီ ပုံ ( ၅ ) အဆင့်မှာတော့ I accept the license terms ဆိုတာကလေးမှာ အမှန်ခြစ်ကလေးထည့်ပြီးတော့ Next ကိုပဲပေးလိုက်ပါ၉ 12.
ပုံ ( ၆ )ဒီ ပုံ ( ၆ ) အဆင့်မှာတော့ ကိုယ်က အရင်ရှိပြီးသားကို Upgrade လုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အောက်က Custom ( advanced ) ဆိုတာကိုပဲ ရွေးပေးရပါ့မယ်၉ ပုံ ( ၇ )ပုံ ( ၇ ) မှာကတော့ ကိုယ်က ဘယ် Drive ထဲကို Window တင်မလဲဆိုတာကလေးကိုမေးထားတာပါ၉အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်က VM ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် တခြား Drive တွေမပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၉ အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်စက်မှာ ရှိသမျှ Drive တွေ အားလုံးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ၉ အဲဒီ့မှာကိုယ်က Disk ( C ) ထဲမှာပဲတင်မှာလား ဘာလားဆိုတာကိုရွေးရပါ့မယ်၉ ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာ ပြထားတဲ့ Drive option ( advanced ) ဆိုတာကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ၉ နှိပ်လိုက်ရင်တော့ပုံ ( ဿှ ) ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ၉ 13.
ပုံ ( ဿှ )အဲဒီ့ ပုံ ( ဿှ ) ကိုရောက်သွားရင်တော့ ကိုယ် Window တင်မယ့် Drive ကိုရွေး ပေးပါ ၉ ပြီးရင်တော့အဲဒီ့ Drive ထဲမှာ အရင်က လက်ကျန် Window တွေကို မကျန်စေချင်တဲ့အတွက် Window တွေကိုFormat ရိုက်ရပါ့မယ်၉ တကယ်လို့မှ အရင် က ဟာတွေကို လည်းမဖျက်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့Format ရိုက်စရာမလိုပါဘူး ၉ ပြီးရင်တော့ Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ၉ ပုံ ( ဿဿ )ပုံ ( ဿဿ ) ကတော့ Window Installing လုပ်နေတဲ့ပုံကလေးပါ၉ အဲဒီ့မှာ တော့ ကိုယ်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး စောင့်ရပါ့မယ်၉ Window XP တုန်းကလိုဆိုရင်တော့ အများဆုံး ၁၇မိနစ်ပေါ့. စောင့်ပြီးသွားရင်တော့ သူ့အလိုလို Restart ကျသွားပါ့မယ် ၉ ( ပုံ ဿဝ) 14.
ပုံ ( ဿဝ )ပုံ ( ဿ၁ )ပုံ ( ဿ၂ ) 15.
ပုံ ( ဿ၂ ) မှာတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ တကယ်လို့ Key ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီ့မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ၉ Keyမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ Next ပဲပေးလိုက်ပါ.၉ နောက်မှ Activated ဖြစ်အောင်လုပ်လိ့ရပါတယ်၉ုပုံ ( ဿ၃ ) ပုံ ( ဿ၎ ) 16.
ပုံ ( ဿ၅ )ပုံ (ဿ၆ )ပုံ ( ဿ၇ ) 17.
ပုံ( ၀ှ )ပုံ ( ဿ၃ ) ကနေပြီးတော့ ( ၀ှ ) ထိမှာတော့ ထွေထွေထူးထူးသိပ်ပြီးတော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး ၉သူ့ပေးထားတဲ့ စာကလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်ရာရွေးပြီးတော့လုပလည်းရပါတယ်၉ကျွန်တော်ပုံကလေးထဲမှာပြထားသလိုလုပလည်းရပါတယ်၉ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်၉်ပုံ ( ဿ၂ ) မှာတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Window7ကို Activated ဖြစ်ဖိ့အတွက် Loader ဖြစ်ဖြစ်ုActivator ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု သုံးပြီးတော့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၉ အဲဒီ့ Loaderကလေးတွေကိုတော့အောက်က လင့်တွေမှာ သွားယူနိုင်ပါတယ်၉http://mglhulin.blogspot.com/2009/11/window-7-vista-activators.htmlhttp://www.myanmaritresource.info/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=activator&show_results=topicsပုံကလေးတွေနဲ့ မလို့ အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ၉Window7မှာ တခြား Home premium ၈ business စသဖြင့် ရှိပါသေးတယ်၉ အဲဒါတွေကိုInstall လုပ်ရင်လည်း ဒီအဆင့်တွေအတိုင်းပါပဲ၉ အဲဒီ့ အဆင့်တွေပြီးသွားရင်တော့ Window တစ်ခုကိုအောင်မြင်စာ တင်ပြီးပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် …ွဒီတစ်ချက်ကတော့ Window7သုံးတဲ့အခါမှာ အသံပိုင်းနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ညှိတတ်တာကလေးပါ၉ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ sound card ပါတယ်ဆိုရင်တော့ အေးဆေးပါပဲ .. ဒါပေမယ့် mother board မှာပါတဲ့Realtek ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းကလေး ပြဿနာကလေးရှိလာပါတယ် .၉အသံကတော့ထွက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် တခြား Vioce ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျရင်နည်းနည်းလေးကသိကအောက်နဲ့ပါ.၉ ခါတိုင်းသုံးနေကျလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး၉ ( ဥပမာ ၉ ၉ Gtalk မှာ စကားပြောရင်တောင်မှ အရင်ကလို အဆင်မပြေတော့ပါဘူး၉ )အဲဒါကလေးကို ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်၉ လိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Motherboard CD လိုတာပါ၉ လုပ်တာကလည်းသိပ်တော့မကြာပါဘူး၉အရင်ဆုံး Motherboard CD ကို ထည့်ထားလိုက်ပါ ၉ ပြီးရင်တော့ My computer ကို R-clickထောက်လိုက်ပါ၉ ပြီးရင်တော့ Manage ဆိုတာကလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ၉ 18.
နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Computer Management ဆိုတဲ့ Box တက်လာပါလိမ့်မယ်၉ အဲဒီ့က DeviceManager ဆိုတာကလေးကိုထောက်လိုက်ပါ ၉ထောက်ပြီးသွားရင် ဘေးဘက်မှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် ၉ Sound video and game controllerဆိုတာကလေးပါ ၉ အဲဒါကလေးရဲ့ အောက်မှာ sound box ပုံကလေးတွေ ရှိပါတယ်.၉ အဲဒီ့မှာ HighDefinition Audio Device ဆိုတာကလေးကို R-click ထောက်လိုက်ပါ၉ ပြီးရင်တော့ Update Driverဆိုတာကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ၉ 19.
အဲဒါဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် Box တစ်ခုတက်လာပါ့မယ် ၉ အဲဒီ့ software ကို ဘယ်ကနေပြီးတော့ရှာမှာလဲ ၉ Online ကနေရှာမှာလား ၉ ကိုယ့် စက်ထဲကပဲရှာမှာလားဆိုတာပါ၉ အဲဒီ့တော့ကိုယ့် ရဲ့ CDခွေထဲကပဲ ရှာရမှာပေါ့၉အဲဒါကလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ Browse ကနေပြီးတော့ကိုယ့် ရဲ့ Drive ကိုရွေးပေးပြီး Ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၉အဲဒီ့မှာ OK ကိုနှိပြ် ပီးရင်တော့ အောက်မှာ Next ဆိုတာကလေးရှိပါသေးတယ်၉ အဲဒါကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ၉ နှိပ်လိက်ရင် သူ့ဘာသာသူ ရှာပါလိမ့်မယ်၉ နောက်တော့ Installing Driver softwareုဆိုပြီးတော့ ပေါ်လာပြီး Finished ဆိုတဲ့ Buttom ကလေးပေါ်လာပါ့မယ်၉ အဲဒါဆိုရင်အဲဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ အဆုံးသတ်လို့ရပါပြီ၉ Restart ချပြီးသွား၅င်တော့ Realtek ကို အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာပါ ၉ 20.
အားလုးံ အဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်လျက် ….. မြန်မာအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးရေးဖိုရမ် www.myanmaritresource.info လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် www.mglhulin.blogspot.com Recommended
C programming myanmar
using usb for lock and unlock ur computer
အလွယ်ကူဆုံး Window ပေါ်မှ partition ပိုင်းနည်း